एकाविहानै नेपाल हल्लायो शक्तिशाली भूकम्पले, १ जना जना घाइते, कहाँ हो केन्द्रविन्दु ? — Imandarmedia.com
एकाविहानै नेपाल हल्लायो शक्तिशाली भूकम्पले, १ जना जना घाइते, कहाँ हो केन्द्रविन्दु ?
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत लमजुङ केन्द्र रहेर आज बिहान भूकम्प गएको छ। लमजुङको भुलभुले, बाँझाखेत आसपास केन्द्र रहेर बुधबार बिहान ५ बजेर ४२ मिनेटमा ५.८ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रले जानकारी दिएको छ।
भूकम्पको धक्का गोरखा, तनहुँ, धादिङ, काठमाडौं, कास्कीलगायत जिल्लाका बासिन्दाले महसुश गरेका थिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी होमप्रसाद लुइँटेलका अनुसार भूकम्पले घरको गारो भत्किएर एक जना वृद्धा घाइते भएको जानकारी आएको छ।
भुलभुलेकी ८५ वर्षीया वृद्धा घाइते भएकी हुन्। उनलाई उपचारका लागि स्थानीय स्वास्थ्य चौकी लगिँदैछ। ‘घरको गारो भत्किएर एक जना वृद्ध घाइते भएको जानकारी आएको छ,’ उनले भने, ‘केही घरमा क्षति पुगेको छ। सबै विवरण आइसकेको छैन।’
यस्तै भारतमा शक्तिशाली ‘ताउ-ते’ चक्रावतले कम्तीमा २० जनाको मृत्यु भएको छ । भारतका पश्चिमी राज्यहरूमा शक्तिशाली समुद्री तुफानले कम्तीमा २० जनाको मृत्यु भएको तथा दुई लाखभन्दा बढी मानिस विस्थापित भएको बीबीसीले जनाएको छ ।
अत्यन्त शक्तिशाली भनिएको ‘ताउ-ते’ तुफान पश्चिमी राज्य गुजरातको तटमा झन्डै २०० किलोमिटर प्रतिघण्टासम्मको वेगमा बज्रिएको जनाइएको छ । कयौँ क्षेत्रमा हावाको वेग १८५ किलोमिटर प्रतिघण्टा पुगेको र त्यसले समुद्रमा १३ फिटसम्म छाल उचालिन सक्ने बताइएको छ ।
गुजरात राज्यका विभिन्न स्थानमा बजारिएको यो तुफान सन् १९९८ यताकै सबभन्दा शक्तिशाली मानिएको छ । भारतीय मौसम विभागले गुजरातको छिमेकी राज्य महाराष्ट्रमा पनि उच्च सतर्कतामा अपनाउन अपील गरेको छ ।
भारतीय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार महाराष्ट्रको राजधानी मुम्बईको तटपारि व्यापारिक जहाजमा चार सयभन्दा धेरै मानिस फसिरहेका छन् । तीमध्ये ३८ जनाको मात्रै उद्धार भएको छ ।
यस्तै अरब सागरमा विकसित भएको ‘टाउ टेई’ नामको शक्तिशाली चक्रवातको असर नेपालमा पाँच दिन पर्ने भएको छ । अहिलेकै समयमा पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणाली विकसित भई प्री–मनसुन थप सक्रिय भएकाले पनि नेपालमा सोमबारदेखि दोहोरो मौसमी असर सुरु भएको छ । अहिले पनि अरब सागरमा आफ्नो उग्र रूप निर्माण गर्न सक्रिय रहेको ‘टाउ टेई’ चक्रवात जमिनमा नखसेसम्म यसले आसपासका क्षेत्रमा असर पुर्याउने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । चक्रवातले प्रत्यक्ष असर नपारे पनि भारत हुँदै आउँदा अप्रत्यक्ष असर बढी देखिने भएको हो ।
उनका अनुसार भारतमा यस चक्रवातको असर विगत केही दिनयतादेखि नै चर्को रूपमा देखिएको छ । तर त्यो असर नेपालसम्म आइपुग्दा कमजोर हुने भएकाले पनि ढिला र कम असर पर्ने सम्भावना रहेको उनले बताए ।
महाशाखाका अनुसार मङ्गलबारसम्म सामान्य रहने चक्रवातको असर बुधबारदेखि शुक्रबारसम्म भने अलिक बढी हुनेछ । बुधबारदेखि आकाश पूर्ण रूपमा बादलले ढाक्ने र विभिन्न क्षेत्रमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने सम्भावना महाशाखाले औँल्याएको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
चक्रवात भनेको सामुद्रिक आँधी हो । चक्रवातले २०० देखी ३०० सय किलोमिटर सम्मको रेडीयस बनाएर घुम्छ । यो एकदम शक्तिशाली हुन्छ ।चक्रवात भनेको जहाँ वायुमण्डलीय चाप कम छ त्यहाँ धेरै कडा हावाहरू एक ठाउँमा जम्मा हुन्छ ।
तिनीहरू ठूलो घेरामा अघि बढ्छन् र आफैँ वरिपरि घुम्छन् । बेला–बेला आउने यस्ता चक्रवातको नाम राख्ने गरिएको छ । अहिलेको यो चक्रवातको नाम ‘ताउ ते’ म्यानमारले राखेको नाम हो ।